Ndiani anotarisa pane collagen chigadzirwa
Kwaziso dzakanakisa kubva kuYasin. Nhasi tinoda kugovana iwe mumwe webasa vedu mr. Ling, nyaya yake yemunhu inotikurudzira uye inotichengeta tichigara tichishanda naye pamwe chete. Anomuka mangwanani-ngwanani uye anoshanda nesimba mazuva ese, izvo zvinongotora gore rimwe chete kuti ave mutevedzeri wemutungamiriri wekutsvaga kubva kune munhuwo zvake ...
Simba reKutsigira Vatengi Vedu
Tinotenda zvikuru nekuvimba kwako nerutsigiro rwedu.we tichachengeta masimba edu ekutsigira vatengi vedu kukudziridza bhizinesi rinowedzera mumusika wavo nhanho nedanho. Uye pano tinoda kugovana newe zvatingaitira iwe, seinotevera: 1.Factory yekuongorora rutsigiro: Yasin, isu hatisi chete kupa yedu ...
Wepamusoro 3 Mugadziri muChina we EMPTY CAPSULE
YASIN GELATIN ndiyo yepamusoro 3 inogadzira muChina ye EMPTY CAPSULE. Isu takabatana pamwe nevakawanda vane mukurumbira wemishonga mhando pane izwi rese. Vazhinji vatengi vanogutsikana nemhando yepamusoro. Zvigadzirwa zvedu zvinobudirira ndeye gelatin capsule uye (veg) HMPC isina chinhu capsule. Tine simba abili ...
YASIN GELATIN - Nyanzvi inogadzira Paintball Gelatin kubva kuChina
Paintball mutambo unozivikanwa kwazvo pasirese. Paintball ndiyo zvombo zvinoshandiswa mupfuti yepende. Gelatin ndechimwe chezvinhu zvakakosha panguva yekugadzira paintball. Muyero wegelatin ndeye 40% -45%. Iyo gelatin yakashandiswa mupeyinti ndeyekuderedza simba remhedzisiro. Iyo gelatin ndeye ...
Yakatsiga Dhirivhari Nguva Guarantee
Isu tiri nyanzvi inodyiwa / mishonga gelatin inogadzira kweanopfuura makore makumi matatu nemashanu muChina. Kana iwe uine chero nyaya nezve isina kugadzikana nguva yekuendesa, ndapota ona pazasi ruzivo rwedu kwauri. 1.Simba rekugona kugona-Unogona kugamuchira zvinhu zvako nenguva kunyangwe mwaka wepamusoro. Kubuda kwemazuva ese kunosvika 8mt ...
Chii chinonzi Jelly Glue Animal Glue Adhesive?
Chii chinonzi Jelly Glue Animal Glue Adhesive? 1) JELLY KUKUNDA KANA KUNE MHUKU MAGURUESI anonamatira mvura. 2) Mhuka inonamira ndeimwe mhando yeprotein inonamira inogadzirwa kubva kune zvese zvakasikwa zvigadzirwa, yepanyama polymer. 3) Iwo anotorwa kubva ku collagen, puroteni inoumbwa nematehwe uye nyama inobatanidza, pri ...
Isu tinoita sei nyoro kapuru nekushandisa gelatin?
Kuti unzwisise zvirinani nezve kugadzirwa kwesoft capsule. Pano tinoda kupa sumo dzakadzama seinotevera: 1. Kuyera mbishi mbichana maererano nekugadzirisa fomura. Wedzera mvura mutangi uye kupisa kusvika pamadhigirii makumi manomwe. uyezve wobva wawedzera glycerin, colorant uye zvinochengetedza mu gelati ...
Kubatsira kwaGelatin Kubva kuYasin
Mushure memakore aya kugadzirisa mune tekinoroji, mhando yedu yakagadziridzwa zvakanyanya. Iye zvino mhando yedu inochengetedza yakagadzika uye mune yepamusoro mwero. isu aivigirwa kuna USA, Bangladesh, New Zealand, South Korea, Vietnam, Indonesia, Pakistan, Turkey, etc. uye vatengi vari satisfi ...
Empty capsule kuyerera chati
Yasin isina chinhu capsule kambani iyo nyanzvi yakasarudzika mune isina chinhu capsule mu china.Glad kuziva iwe uri mune capsule munda uye uine mukurumbira mukurumbira, isu tinotarisira nemoyo wese kutanga kubatana kwedu kubva kune imwechete mirairo mirairo, Kana zvichikwanisika, masampuli anogona kupihwa ako ekuyedza emhando uye kuenzanisa. Isu ...
Iko Kushanda kweKudya Giredhi Gelatin
Chikafu Giredhi Gelatin Kudya giredhi gelatin inosiyana kubva makumi masere kusvika makumi maviri neshanu Bloom. Gelatin inowanzozivikanwa sechikafu chakachengeteka. Yayo inonyanya kudikanwa ehupfumi ndeye ayo akanyungudika-mu-iyo-muromo maitiro uye kugona kwayo kwekugadzira thermo inodzoserwa gels. Gelatin ipuroteni inogadzirwa kubva parti ...
Chii chinonzi INDUSTRIAL GELATIN (TECHNICAL GELATIN)?
INDUSTRIAL GELATIN yakajeka tsvuku, tsvuku kana yakasviba tsanga, iyo inogona kupfuudza iyo 4mm aperture standard sieve. Icho chinopenya, chinoputika (kana chakaoma), chinenge chisina kunaka chakasimba, chinotorwa kubva ku collagen mukati memhuka "ganda nemapfupa. Icho chakakosha chemakemikari mbishi zvigadzirwa. Icho chiri ...
Ndeupi musiyano uripo pakati peindasitiri gelatin uye inodyiwa gelatin?
1. Kufanana pakati peindasitiri gelatin uye inodyiwa gelatin: Dzinodyiwa nedzemabhizimusi gelatin mapuroteni. 2.Musiyano uripo pakati peindasitiri gelatin uye inodyiwa gelatin: Kubviswa kweiyo inodyiwa gelatin uye maindasitiri gelatin haina kunetsa. Musiyano wakakosha urimo mune yakasvibirira materi ...
Kwete .99, Channel Pearl Plaza, Yilan Road, Siming Dunhu, Xiamen, China.